अन्तराष्ट्रिय Archives - Page 82 of 84 - चारदिशा
अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा गोली प्रहार: ११ जनाको मृत्यु
अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा अन्दाधुन्द गोली प्रहार हुँदा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । एक प्रहरीसहित ६ जना घाइते भएका छन् । यो घटना एक सरकारी कार्यालयमा भएको हो । भर्जिनिया बीच म्युनिसपल सेन्टरको एक कर्मचारीले आफ्नो कार्यकक्षमा अन्दाधुन्द गोली चलाउँदा ११ जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ ।...
भारतमा जयशङ्कर मन्त्री हुँदा नेपालमा तरङ्ग, किन ?
काठमाडौँ – भारतमा पूर्वविदेश सचिव एस जयशङ्कर मन्त्री बनेपछि त्यसप्रति नेपालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्नुअघि भारत सरकारका विशेषदूतको हैसियतमा काठमाडौँ आएका जयशङ्करले संविधान जारी गर्ने मिति पर धकेल्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताइन्छ । तत्कालीन सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भारतीय आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि...
जासुसीको आरोपमा नेपाली युबतीहरु गिरप्तार
चारदिशा ,सम्बाददाता, बेल्जियम, लेबनान सरकारले दुई नेपाली युबतीहरुलाई इजरायलको लागि जासुसी गरेको आरोपमा गिरप्तार गरेको छ । पब्लिक सेक्युरिटी जनरलको कार्यालयका अनुसार ति नेपाली महिलाहरुले नेपाल एबम अन्य देशमा रहेका इजरायली दुताबासलाई लेबनानका सुचना दिने र त्यस कामका लागि अन्य ब्यक्तीहरुको पनि प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लागाइएको छ ।...
पानामा दस्ताबेजमा दोषी देखाइएपछि विश्वका नेताहरूबाट प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । कसैले नेतृत्वबाटै राजिनामा दिए भने धेरैले आफुहरू निर्दोष भएको भन्दै अरोपको खण्डन गरेका छन् । केहीले यस सम्बन्धमा अझै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । पानामा पेपर्स विवादमा मुछिएका विश्वका धनी तथा शक्तिशाली नेता, व्यापारीका फरक फरक धारणा आए ।...
उडिरहेको विमानमा विस्फोट
सोमालिया । सोमालियामा उडिरहेको एउटा विमानमा विस्फोट भएको छ । विस्फोटमा संलग्न संदिग्ध हमलाकारी भने विमानबाटै हामफालेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार सोमालियाको राजधानी मोगादिसुबाट अफ्रिकाको जिबोटीका लागि उडान भरेको डाल्लो एअरलाइन्सको विमानमा विस्फोट भएको हो । अधिकारीहरुका अनुसार उडान भरेको पाँच मिनेटमै विस्फोट भएको थियो ।...
बेल्जियममा उच्च सुरक्षा सर्तकता
ब्रसेल्स, ६ मङ्सिर । बेल्जियमका विदेशमन्त्री दिदिर रेन्डरर्स्ले बेल्जियममा सम्भाव्य आतङ्ककारी हमला रोक्नका लागि आवश्यक सबैखाले उपायहरु अबलम्बन गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँले बेल्जियममा पनि यस्तो आक्रमणको त्रास रहेको भन्दै तर सो आक्रमणलाई तिस्तेज पार्न यस्तै सबैखाले उपायहरु अबलम्बन गरिएको बताउनुभएको समाचारमा जनाइएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार गतहप्ता फ्रान्सको...
ग्रीसको ठोस प्रस्ताव आएन : जोसेफ मसकट
ब्रसेल्स, २३ असार । मङ्लबार भएको अर्थ मन्त्रीहरुको बैठक पश्चात प्रतिक्रिया दिँदै माल्टाका प्रधानमन्त्रीले ग्रीसले आफ्नो देशको आर्थिक समस्या समाधानका लागि ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नसकेको जनाउनुभएको छ । “मङ्गलबार साँझ भएको युरोक्षेत्रको नेताहरुको बैठक ग्रीसबाट उपयुक्त एवम् ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नसक्दा अर्थहीन भएको छ,” माल्टाका प्रधानमन्त्री जोसेफ...
विश्वका जेठा व्यक्तिको ११२ वर्षको उमेरमा निधन
टोकियो, २२ असार । विश्वका सबैभन्दा जेठा व्यक्तिको निधन भएको छ । जापानी नागरिक साकारी मोमोयीको ११२ वर्षको उमेरमा निधन भएको जापानी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । जापानी अधिकारीहरुले यही आइतबार उहाँको निधन भएको बताएका छन् । जापानको साइतामा नगरका अधिकारीहरुले उहाँको निधन भएको औपचारिक जानकारी मङ्गलबार दिएका हुन् ।...
राष्ट्रपति ओबामा सैन्य अधिकारीबीच छलफल
वासिङटन, २२ असार । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सैन्य गतिविधि अद्यावधिक गर्नकालागि पेन्टागनको भ्रमण गरी सैन्य अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति ओबामाको ‘दुर्लभ’ भ्रमणमा अमेरिकाले मुस्लिम राज्यविरुद्ध चलाएको अभियानको बारेमा जानकारी लिनुभएको बताइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाको यो सैनिक अधिकारीसँगको भेट सिरियामा भएको साताव्यापी अमेरिकी नेतृत्वको फौजले...
फेसबुकमा हिट भएको तस्बिर कसको होला ?
लण्डन, २१ असार । संभवत हामी सबैको फेसबुकमा एउटा तस्विर निकै हिट छ । तस्विरसँग रमाइला जोक्सहरु पनि पढ्न पाइन्छ । कार्टुन र जोक्सले सबैलाई खित्का छाडेर हाँस्न बाध्य बनाउँछ । तर फेसबुकमा देखिने उक्त तस्विर कसको होला भनेर सबैलाई कौतुहल भएकै हुनुपर्छ । मंगोलियन अनुहार भएको उक्त तस्विर...